नयाँ घर किनेर कतार गए,ऋण तिर्न नपाउंदै परिवार नै भैदियो एकै चि’हा’न !
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङका माधव पौडेलले पुरानो घर भत्किने अवस्थामा पुगेपछि गाउँमै अर्को घर किनेर परिवारलाई त्यसमा राखे ।
बुवाले सानैमा बनाएको घर बस्न नमिल्ने भएपछि उनले गाउँकै एक महिलाको घर किनेका थिए । बूढी भइसकेकी आमासहित ६ जनाको परिवार किनेको घरमा सरेको पनि आउने मंसिरमा २ वर्ष पुग्छ । सानैमा बुवाले छाडेर गए। त्यसमाथि आर्थिक स्थित निकै नाजुक भएकाले आफैंले नयाँ घर बनाउन नसक्ने लागेर उनले गाउँकै एकल वृद्धाको घर किनेका थिए ।
५ जनाको परिवार त्यही घरमा राखेर रोजगारीका सिलसिलामा कतार गएका माधवको परिवारका कोही पनि बाँ-की र-हेनन् । हिजो बिहीबार राति घरमाथिबाट आएको प-हि-रो-ले घर पुरिँदा उनले आमा,पत्नी, दुई छोरी र एक छोरा सबैलाई ए-कैरा-तमा गु-मा-ए ।
राति सवा २ बजेतिर गएको पहिरोमा घर पुरिँदा ७० वर्षीया आमा कौशिल्या, ३५ वर्षीया पत्नी भगवती,छोरीहरू १५ वर्षीया विमला र ११ वर्षीया विनिताका साजै ९ वर्षका छोरा विनोदलाई सधैंका लागि गु-मा-ए । ‘बाबुले बनाएको पुरानो घर भ-त्कि-ने ड-र-ले नयाँ घर किनेर परिवार त्यसमा राखी आफू कतार गएका हुन्,
फर्किन नपाउँदै यता पहिरोले परिवार नै स-खा-प पा-रिदि-यो,’ वडाध्यक्ष तेजप्रसाद पाध्याले भने, ‘गाउँकै सोझो र निकै मिलनसार मान्छे हुन् उनी, उनैमाथि यति ठूलो ब-ज्र-पा-त भयो।’
तेजप्रसादका अनुसार ​त्यो घर पनि उनले २ वर्ष क-ता-र बसेर क-मा-ए-को रकमले किनेको र अझै केही पैसा तिर्न बाँकी छ। घरको बाँकी तिर्न र परिवारको ला-लनपा-लनका लागि फेरि क-ता-र गएका माधवसँग अब घर परिवार केही बाँकी नरहेको उनले सुनाए । ‘सानैमा बुवा बितेपपछि वृद्ध आमा र परिवार लालनपालनको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका थिए,’ उनले भने,
‘आफू नआउन्जेल दाहसंस्कार नगर्न भनेका छन्, ५ जनाको श-व कसरी हेर्न स-क्ला-न् ? हामी त केही सोच्नै सकिरहेका छैनौं।’ माधवले आफू कतारबाट भोलि आउने खबर गरेको उनले बताए ।